ỌNỤ EGO TANKỊ NA WORLD OF TANKS NA MARCH 2019 - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Ịgba ntụrụndụ na-abịa na njedebe, ndị mmepe na Wargaming agwakọtawo ihe ndị a site na ịchọpụta ndị alaka nke tankị ga-etinye aka na March 2019.
Ahịa na ngwá ọrụ aghọwo ọdịnala dị mma na World of Tanks. N'ọnwa gara aga, ndị na-eme egwuregwu nwere afọ ojuju maka ọnụ ala T110E4 na AMX 13 105. Na March, ndị ọrụ na-atụ anya ka ọnụ ahịa ego dị na Ihe 277 na tankị ọ bụla na-ebubata mmiri, nakwa na alaka ụlọ ọrụ 60pt Lewandowskiego.
Nnwale ndị pụrụ iche
Soviet tank X ọkwa Ihe 277 n'ihu Swedish mgbochi tank ACS Strv 103B na French ọkara tank Bat.-Châtillon 25 t. A na-ekesa ego na alaka ụlọ ọrụ na-eduga ndị mkpọrọ Soviet site na March 1 ruo March 15.
A na-ewere ihe egwuregwu 277 site na ndị na-egwu egwuregwu dị ike nke teknụzụ, ụfọdụ ana-akpọkwa ahaghị. Osimiri ahụ na-esote usoro mgbapụta ahụ karịa T-10, nke, n'aka nke ya, meghere mgbe IS-3 na-amanye. Ụlọ elu na-echekwa ihu ọma Soviet 277th dị egwu na-akụda mmebi.
Ọ bụ mgbe ọ bụla ị na-ahụ maka ihe ndị ahụ, ma ọ bụrụ na ị na-ahụ ihe na-achọsi ike ma zigara onye iro ahụ nwere ike ịchọrọ ya ọnyà, ị ga-anwale, n'ihi na ọnụma nke egbe ahụ bụ nnọọ mediocre. Ee, na Ihe 277 n'onwe ya nwere ike ịghọ nri dị ụtọ maka ndị na-amaghị ihe, n'ihi na ndị egwuregwu na-ahụ ihe agha na-adịghị ike, bụ nke a na-akụkarị tank ahụ. Iji tụnyere ya, obere ọdụdụ X nke ndị Germany bụ VK 72.01, nke nwere ụlọnga abụọ na narị abụọ na narị abụọ na iri abụọ na asaa maka 277th. Banyere òké na ya 3000 agha n'ozuzu nkịtị. Na ngwa ngwa na Ihe a bụ ihe na-adịghị ike: 140/112/50 mm na ikpe, mgbe otu VK 72.01 nwere 240/160/120 mm.
Malite na March 1 ruo March 16, ndị ọrụ ga-enwe ike ịnweta ego nke 50% maka ngwá ọrụ site na nke anọ ruo n'ọkara nke ise site na alaka ụlọ ọrụ 277. Ndepụta a gụnyere tankị T-28 na kV-1 na KV-1C dị arọ abụọ. Maka ụdị ọ bụla dị arọ nke ígwè dị arọ na-achọsi ike na Ihe 277, ego nke 30% ga-etinye.
Ndi mmepe nke Wargaming ekwuputala ule di iche iche maka inweta onu ozo maka iji isi ala Soviet na ndi ozo. Iji nweta akwa "Tank Tank" ma nwee mmetụ nke ugboro abụọ, ndị egwuregwu kwesịrị ịbanye n'ime egwuregwu asaa kachasị mma nke ndị otu ha na-ejighị ọnụ ọgụgụ ugboro ole.
Ugboro 10 maka oge nke ndị gamers ego ga-anwale ike ha na chelendzhe iji nweta ahụmahụ. Maka mkpụrụ ego 17,500 gbakọtara, ị ga - enweta ihe karịrị 5,000 ma nweta pasent 50% na uru ahụmahụ 1 hour.
Ozugbo ndị egwuregwu nwere ike ịnweta nnukwu égbè, ma ọ bụrụ na ha eburu ihe dị otu narị na iri asaa na asaa na ntinye ọrụ na mpaghara 277, na iji nweta 10 servings nke Doppayk, ị ga-enweta akara aka tank 35.
Malite na March 16 ruo Eprel 1, ndị ọrụ ga-enweta ego na alaka ụlọ ọrụ Poland, nke ga-eduba ha na nnukwu tank 60TP Lewandowskiego. Na nghoputa, ibu arọ a na-agafe Soviet T-100 LT site na 9 votes nke egwuregwu! Ntakịrị ihe n'azụ ndị ndú n'azụ M48A5 Patton.
Iji nweta 60pt Lewandowskiego tank, ndị egwuregwu ga-aga site na 10TP, 14TP, 25TP KSUST II, ​​Habiki 40TP, 45TP Habicha, 53TP Markowskiego na 50TP Tyszkiewicza, nke ga-abụkwa n'okpuru ego.
Ihe ndị dị oké ọnụ ahịa 60TP Lewandowskiego nwere akwa mmebi na nnukwu ụlọ elu agha. Na nke a, ọ dị ka nke a na-atụle ihe nke 277. Ma ndị na-egwu egwuregwu n'etiti ndị na-egwupụta egwu na-egosi obere ọsọ nke tank na ezi ntụpọ nke isi iyi.
Banyere ọtụtụ ego na ihe omume pụrụ iche na 60TP Lewandowskiego Wargaming ga-ejide n'aka na ị na-akọ na akụkọ vidiyo na March 17. O yikarịrị ka a ga-ekesa ego site na nkwekọrịta oge oge, ndị egwuregwu ga-enweta pasent 50% na ọnụahịa nke tankị ruo ọkwa 6 na ọnụego 30% nke ọnụahịa dị elu, yana ọtụtụ nlele maka ịnweta onyinye ọzọ.